ဆက်ရာဂျစ် ရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ရေး ကို နယူးယောက်တွင် တွေ့ရစဉ် (၁၉၈၁)
(1921-05-02)၂ မေ၊ ၁၉၂၁
ကာလကတ္တားမြို့၊ ဘင်ဂေါ စီရင်စု၊ ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယ
၂၃ ဧပြီ၊ ၁၉၉၂(1992-04-23) (အသက် ၇၀)
ကာလကတ္တားမြို့၊ အနောက် ဘင်ဂေါ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ
ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယ (၁၉၂၁–၁၉၄၇)
ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ၊ တေးရေးဆရာ၊ ဂီတဖန်တီးသူ၊ အကဆရာ၊ သရုပ်ဖော်ပုံဆွဲသူ၊ စာရေးဆရာ
၆ ပေ ၄ လက်မ (၁.၉၃ မီတာ) 
ဆန်ဒစ် ရေး (သား)
ဆုကူးမား ရေး (အဖေ)
ဆူပရာဘာ ရေး (အမေ)
ဆက်ရာဂျစ် ရေး (အင်္ဂလိပ်: Satyajit Ray; ဘင်္ဂါလီ: সত্যজিৎ রায়) သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူနှင့် စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး နှစ်ဆယ်ရာစုအတွင်း အခမ်းနားဆုံးသော ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများအနက် တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ရေးကို ကာလကတ္တားမြို့တော်ရှိ ဘင်ဂါလီ ဗြမ္မာ မိသားစုလေးတစ်ခုမှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ စီးပွားရေးအနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် အသက်မွေးနေသော ရေးသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် လန်ဒန်သို့ အလည်ခရီးထွက်ခဲ့ရာမှ ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူ ယန်း ရေနွား နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဗွီတိုရီယို ဒီ စီကာ၏ အီတာလျံ နီယို ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သော စက်ဘီး သူခိုးများ (၁၉၄၈) ကို ကြည့်ရှုမိသွားပြီးနောက် လွတ်လပ် ရုပ်ရှင်များ ဖန်တီးရန် စတင် စိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်။
ရေးသည် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ၊ သတင်းရုပ်ရှင်များအပါအဝင် ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း ၃၆ ကားရိုက်ကူးခဲ့သည်။ သူသည် ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ၊ တေးရေးဆရာ၊ ဂီတဖန်တီးသူ၊ အကဆရာ၊ သရုပ်ဖော်ပုံဆွဲသူ၊ စာရေးဆရာ နှင့် ရုပ်ရှင် ဝေဖန်ရေးဆရာတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ရေးအား အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်မှ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ချီးမြင့်ခဲ့သည်။
↑ Archived copy။ 11 August 2003 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2003-08-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tmh (2007)။ Book Of Knowledge Viii, 5E။ Tata McGraw-Hill Education။ ISBN 9780070668065။
↑ Robinson၊ W. Anderson။ Satyajit Ray။ Encyclopædia Britannica။ 26 December 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ "Iconic filmmaker Satyajit Ray's 94th birth anniversary celebrated"၊ Daily News and Analysis၊2May 2015။ Archived from the original on3May 2015။
Biswas, M, ed. (2006)။ Apu and after: Revisiting Ray's cinema။ Seagull Books။ ISBN 978-1-905422-25-8။ CS1 maint: ref=harv (link)
Cooper၊ D (2000)။ The Cinema of Satyajit Ray: Between Tradition and Modernity (PDF)။ Cambridge University Press။ ISBN 0-521-62980-2။ CS1 maint: ref=harv (link)
Dasgupta၊ C (1996)။ The cinema of Satyajit Ray။ Penguin India။ ISBN 0-14-024780-7။ CS1 maint: ref=harv (link)
Ganguly၊ S (2001)။ Satyajit Ray: In search of the modern။ Indialog။ ISBN 81-87981-04-0။ CS1 maint: ref=harv (link)
Y၊ Ishaghpour (2002)။ Satyajit Ray, l'Orient et l'Occident။ Volume 24 of Les essais။ Différence။ ISBN 2-7291-1401-7။ CS1 maint: ref=harv (link)
"The Genius of Satyajit Ray" (1983). India Today.
Nandy၊ A (1995)။ "Satyajit Ray's Secret Guide to Exquisite Murders"။ The Savage Freud and Other Essays on Possible and Retrievable Selves။ Princeton University Press။ ISBN 0-691-04410-4။ CS1 maint: ref=harv (link)
Nyce၊ B (1988)။ Satyajit Ray: A Study of His Films။ Praeger Publishers။ ISBN 0-275-92666-4။ CS1 maint: ref=harv (link)
Ray၊ S (1993)။ Our films, their films (3 ed.)။ Asia Book Corp of Amer။ ISBN 0-86311-317-6။ CS1 maint: ref=harv (link)
Ray၊ S (1994)။ My Years with Apu။ Viking။ ISBN 0-670-86215-0။ CS1 maint: ref=harv (link)
Ray၊ S (2005)။ Speaking of films။ Penguin India။ ISBN 0-14-400026-1။ CS1 maint: ref=harv (link)
Robinson၊ A (2003)။ Satyajit Ray: The Inner Eye: The Biography ofaMaster Film-Maker။ I. B. Tauris။ ISBN 1-86064-965-3။ CS1 maint: ref=harv (link)
Robinson (2005)။ Satyajit Ray: A Vision of Cinema။ I. B. Tauris။ ISBN 1-84511-074-9။ CS1 maint: ref=harv (link)
Rushdie၊ S (1992)။ Imaginary Homelands။ Penguin။ ISBN 0-14-014036-0။ CS1 maint: ref=harv (link)
Santas၊ Constantin (2002)။ Responding to film: A Text Guide for Students of Cinema Art။ Rowman & Littlefield။ ISBN 0-8304-1580-7။ CS1 maint: ref=harv (link)
Seton၊ Marie (1971)။ Satyajit Ray: Portrait ofadirector။ Indiana University Press။ ISBN 0-253-16815-5။ CS1 maint: ref=harv (link)
Wood၊ R (1972)။ The Apu trilogy။ November Books Ltd။ ISBN 0-85631-003-4။ CS1 maint: ref=harv (link)
ဆက်ရာဂျစ် ရေး နှင့်ပတ်သက်သမျှကို
Satyajit Ray Film and Study Center: University of California – Santa Cruz Archived 13 March 2007 at the Wayback Machine.
အိုင်အမ်ဒီဘီပေါ်ရှိ Satyajit Ray
Satyajit Ray: A Vision of Cinema။4January 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ article by W. Andrew Robinson
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆက်ရာဂျစ်_ရေး&oldid=727694" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။